77 mitir oo cajalad ah si loo muujiyo sheekada Ciyaaraha Carshiga | Abuurista khadka tooska ah
Game of Thrones ayaa leh loo maleynayo inay tahay taariikh muhiim u ah taariikhda telefishanka sida taxane ah oo awood u yeeshay inuu soo jiito dareenka habkiisa weyn ee matalaya kan ugu fiican iyo kan ugu xun ee aadanaha. Waxay noqon doontaa waqti dhigaya koonkan uu abuuray George RR Martin booskiisa, halka aan ku raaxeysan doonno iyada oo aan sugeyno xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ee Game of Thrones inuu yimaado 2019.
Tirada badan ee jilayaasha, geesiyaal-diidka, sheekooyinka iyo bay'adaha ay Game of Thrones nagu quusiyaan, ayaa loo qaaday cajalad weyn oo 77 mitir ah oo uu abuuray Dalxiiska Ireland . Waxay ahayd taxanahan oo qayb ka noqday hidaha iyo dhaqanka Waqooyiga Ireland, marka si loogu dabbaaldego, waxay abuureen cajalad balaaran oo derbi ah oo muujinaysa dhacdooyinka, goobaha iyo taariikhda taxanaha telefishanka ugu caansan ee xilliyada oo dhan.
Iyada oo ku saleysan hidaha hodanka ah ee Waqooyiga Ireland marka ay timaado dharka iyo soosaarka dharka, Qalabka ciyaarta ee Thrones oo lagu abuuray flax ay keento mid ka mid ah dhandhaddii flax ee ugu dambeysay badbaaday ilaa xilligan lagu jiro waddankaas.
Ka hor intaadan bilaabin wax soosaarka cajaladda, muuqaal kasta iyo astaamaha muhiimka ah ee taxanaha tv-ga dib ayaa loo abuuray oo ay naqshadeeyeen farshaxanno iyo sawir qaadayaal. Guud ahaan waxaa jiray ilaa 77 saacadood oo shaqo ah oo loo beddelay 77 mitir sawiro iyo sheekooyin la sheegay.
Marka sawirada gacanta la sameeyo, naqshadeeyayaasha ayaa leh dib u cusbooneysiiyay sawirrada si dijitaal ah si loo khariidadeeyo tilmaamaha dharka, oo ay tolay tolliin khabiir. Markii la duubay, daabacaadyaashu waxay si taxaddar leh u taabteen faahfaahin kasta oo wanaagsan oo laga soo qaaday taajka dahabka ee King Joffrey illaa iyo timaha nadiifka ah ee Daenery.
Cajaladaha Ciyaarta Carshiga waxaa lagu arki karaa Matxafka Ulster ee magaalada Belfast. Qayb cusub ayaa lagu daray sanadkii la soo dhaafay iyadoo mid kasta oo ka mid ah dhacdooyinkii xilli ciyaareedkii toddobaad ee Ciyaaraha Carshiga la baahiyay.
Waxaad leedahay webka waayo, bogaadi hawsha oo dhan iyo cajaladda, marka laga reebo in la sahamiyo mid kasta oo ka mid ah sheekooyinka halista ah ee Game of Thrones.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Cajalad 77-mitir ah oo laga sameeyay Ireland waxay muujineysaa sheekooyinka halista ah ee Game of Thrones